१ कोरिन्थी ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ कोरिन्थी ४:१-२१
४ मानिसहरूले हामीलाई ख्रीष्टको अधीनमा बसेर काम गर्ने सेवक अनि परमेश्वरको पवित्र रहस्यका भण्डारे ठानून्‌। २ अब यस सन्दर्भमा भण्डारेहरूमा खोजिने कुरा के हो भने, उनीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। ३ अब तिमीहरूले वा कुनै मानव अदालतले मेरो जाँच गर्नु मेरो लागि त्यत्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। भनौं भने, म पनि आफूलाई जाँच्दिनँ। ४ किनकि मलाई आफू कुनै कुराको दोषी छु जस्तो लाग्दैन। तैपनि यसो भन्दैमा परमेश्वरको नजरमा म असल साबित हुँदिनँ, तर मलाई जाँच्ने यहोवा नै हुनुहुन्छ। ५ त्यसैले प्रभु नआउनुभएसम्म, बेला नपुगी कुनै कुराको जाँच नगर। किनकि उहाँले नै अन्धकारमा लुकेका गोप्य कुराहरू प्रकाश पार्नुहुनेछ अनि मनमा लुकेका इच्छाहरूलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। तब हरेकले आफूले पाउनुपर्ने प्रशंसा परमेश्वरबाट पाउनेछ। ६ अब ए भाइहरू हो, मैले आफूलाई र अपोल्लसलाई उदाहरणको रूपमा चलाएर तिमीहरूकै हितका लागि यी कुरा भनेको हुँ, ताकि हामीलाई हेरेर तिमीहरूले यो नियम सिक: “लेखिएका कुराहरूभन्दा बढ्ता केही नगर्नू,” नत्र त तिमीहरू एक जनाको विरुद्धमा अर्कोको पक्ष लिएर घमन्डले फुल्नेछौ। ७ किनकि अरूभन्दा फरक बनाउने के कुरा तिमीसित छ र? कसैले नदिई तिमीले पाएको कुरा के छ र? अब यदि पाएका हौ भने कसैले नदिईकनै पाएजस्तो गरी तिमी किन घमन्ड गर्छौ? ८ तिमीहरू त सन्तुष्ट भइसक्यौ नि, होइन र? तिमीहरू धनी भइसक्यौ नि, होइन र? अनि हामीविनै तिमीहरूले राजाले झैं राज पनि गरिसक्यौ नि, होइन र? तिमीहरूले साँच्चै राजाले झैं राज गरेको भए त हुनेथियो, किनकि त्यसो हुँदो हो त हामीले पनि तिमीहरूसँगै राजाले झैं राज गर्ने थियौं। ९ किनकि मलाई लाग्छ, परमेश्वरले हामी प्रेषितहरूलाई मृत्युदण्ड पाएका मानिसहरूलाई झैं रङ्गशालामा सबैभन्दा अन्तमा प्रदर्शन गर्न राख्नुभएको छ। किनकि हामी यो संसारका लागि, स्वर्गदूतहरूका लागि अनि मानिसहरूका लागि तमासा भएका छौं। १० ख्रीष्टको पछि लागेकोले हामी मूर्ख ठानिएका छौं तर तिमीहरू भने ख्रीष्टको पछि लागेकोले आफैलाई समझदार ठान्छौ; हामी कमजोर छौं तर तिमीहरू त बलिया छौ; तिमीहरूको इज्जत छ तर हाम्रो त बदनाम भएको छ। ११ अहिलेसम्म हामी भोकै छौं, तिर्खाएका छौं, झुत्रेझाम्रे छौं, मुक्का खाँदैछौं, घरबारविहीन छौं, १२ अनि हामी आफ्नै हातले कडा परिश्रम गरिरहेका छौं। गाली खाँदा हामी आशिष्‌ दिन्छौं, खेदो आइपर्दा हामी सहन्छौं, १३ बदनाम हुँदा हामी मीठो वचनले बिन्ती गर्छौं। हामी अहिलेसम्म संसारको लागि कसिङ्गर अनि सबै कुराको कसरझैं भएका छौं। १४ तिमीहरूलाई सरममा पार्न त होइन तर तिमीहरूलाई मेरा प्यारा छोराछोरी ठानेर सल्लाह दिन म यी कुराहरू लेख्दैछु। १५ ख्रीष्टमा तिमीहरूको दस हजार अभिभावक होलान्‌ तर तिमीहरूको बुबा भने पक्कै पनि धेरै छैनन्‌। किनकि सुसमाचारमार्फत ख्रीष्ट येशूमा म तिमीहरूको बुबा भएको छु। १६ त्यसैले म बिन्ती गर्छु, तिमीहरू मेरो देखासिकी गर्नेहरू होओ। १७ यसैको लागि प्रभुमा मेरो प्यारो अनि विश्वासयोग्य छोरा तिमोथीलाई म तिमीहरूकहाँ पठाउँदैछु। मैले ठाउँ-ठाउँका हरेक मण्डलीमा जुन तौर-तरिका सिकाउँदैछु, ख्रीष्ट येशूसित सम्बन्धित तिनै तौर-तरिकाहरू तिनले तिमीहरूलाई फेरि सम्झाउनेछन्‌। १८ कोही-कोही घमन्डले यस्तरी फुलेका छन्‌ कि मानौं म तिमीहरूकहाँ आउन लागेकै होइन। १९ तर यहोवाको इच्छा भए म छिट्टै तिमीहरूकहाँ आउनेछु अनि जो घमन्डले फुलेका छन्‌, तिनीहरू के भन्छन्‌, त्यो त होइन तर परमेश्वरको शक्ति तिनीहरूसित छ कि छैन, त्यो हेर्न चाहन्छु। २० किनकि मानिसले बोल्ने कुरामा होइन तर उसले परमेश्वरको शक्ति पाएको छ वा छैन, त्यसमा परमेश्वरको राज्य आधारित हुन्छ। २१ तिमीहरू के चाहन्छौ? म तिमीहरूकहाँ छडी लिएर आऊँ कि प्रेम र नम्रताको भाव लिएर?
१ कोरिन्थी ४